Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd., dị ka onye ndu na nri ụlọ na ihe ọ beụ beụ ihe ọverageụverageụ ụlọ, mere ọganihu na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ na ụzọ na-aga n'ihu, ma merie otu nkwenye na ntụkwasị obi nke ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi. Ọ ...GỤKWUO »
Usoro ọgwụgwọ nke ọgwụ na-edozi ahụ
Ntughari onu ogwu bu imechi nri n'ime akpa ma tinye ya na ngwa ogwu ogwu, kpoo ya oku na onodu ozo ma debe ya ruo oge, oge bu igbu oria ojoo ahu, nje na-eme ka toxin na nje na-emebi. nri, ma bibie nri ...GỤKWUO »
Ngwa ngwugwu na-agbanwe agbanwe na-ezo aka n'iji ihe dị nro dị ka nnukwu ihe nkiri plastik ma ọ bụ ihe mgbochi igwe na ihe nkiri ha mejupụtara iji mee akpa ma ọ bụ ụdị ihe ndị ọzọ. Iji ahịa aseptic, juru n'ọnụ nri na ike ga-echekwara na ụlọ okpomọkụ. Usoro nhazi na nka ...GỤKWUO »
Nkà na ụzụ ọhụrụ nke DTS uzuoku-ikuku mbuaha sterilization retort
DTS ọhụrụ mepụtara uzuoku na-ekesa ihe nzacha ọgwụ, teknụzụ kachasị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ, enwere ike itinye akụrụngwa ahụ n'ụdị nkwakọ ngwaahịa dị iche iche, na-egbu enweghị ntụ oyi, ọsọ ọsọ ọkụ na uru ndị ọzọ. The ụdị-ụdị nwoke ịga ụlọ ọgwụ ketulu dịghị mkpa ka a kpọpụ site s ...GỤKWUO »
Na Sọnde, Julaị 3, 2016, ọnọdụ okpomọkụ dị 33 Celsius, ndị ọrụ niile nke DTS Marketing Center na ụfọdụ ndị ọrụ nke ngalaba ndị ọzọ (gụnyere Onye isi oche Jiang Wei na ndị isi ahịa dị iche iche) mere isiokwu nke "ije ije, ịrị ugwu, iri nri. ihe isi ike, sweating, w ...GỤKWUO »
Jiri obi ụtọ na-eme ihe ịga nke ọma nke nnabata ụlọ ọrụ nke ọrụ Malaysia
Na Disemba 2019, DTS na ulo oru Nestle Coffee OEM nke Malaysia ruru ebumnuche oru ngo ma weputa nmekorita nke otu oge. Ngwa oru ngo a na-agụnye ntinye na ibudata akpaka, nnyefe nkata nkata, ihe nkedo sterilization ...GỤKWUO »
Nabata Companylọ ọrụ Dingtai ileta ma kwurịta okwu
N'ọnwa June, onye ahịa tụrụ aro na DTS kwesịrị ịnye ọrụ nyocha na nyocha maka nhọpụta nke mkpo sterilization na akpa nkwakọ ngwaahịa. Dabere na nghọta DTS banyere akpa nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ ụlọ ọgwụ ruo ọtụtụ afọ, ọ tụrụ aro ndị ahịa ka ha mepụta -...GỤKWUO »